ကုန်လွန်ခဲ့ပီဖြစ်တဲ့ 2021 ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်လေးမှာ တစ်နှစ်လုံးစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ – Shwe Likes
နာမည်ကျော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေ ကတော့ သရုပ်ဆော င်ပိုင်း မှာသာမက ပညာရေး မှာလည်း ထူးချွန်ထက်ြ မက်တဲ့မ င်းသမီး တစ်လတ် ဖြစ်ပါတယ်။ အ စစအရာရာ ထူးခ ျွန်တဲ့အပြင် ခေတ်သစ်ေ ဖာင်ဒေးရှင်းတည်ေ ထာင်ကာပရ ဟိတလုပ်င န်းတွေကို လည်း လုပ်ဆောင် ခဲ့သူလေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ခင်ပွန်း အဆိုတော် လင်း လင်းနဲ့အတူ အမွှာသ မီးလေး ခေတ် နဲ့ သစ် ကိုပြုစု ပျိုးထောင်ရ င်းေ ပျာ်ရွှင်စရာမိသား စုလေးကို တည်ဆောက် ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သုဝေ က မြန်မာ့နွေဦးတော် လှန်ရေးမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ အစထဲက ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိ န်ထိ အားကြိုးမာ န်တက်ဆက်လက်ေ တာ်လှ န်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ စစ်ကောင်စီ ရဲ့ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖွင့်ခံထား ရတာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ကိုရောက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေ က 2021 ရဲ့ နောက်ဆုံးရ က်လေးမှာ တစ်နှစ်လုံးစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ” Your choice is your life, your dignity and your history!!!
“ကိုယ့်ရဲ့​ရွေးချ ယ်မှု​တွေဟာ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ့်သမိုင်း ပါပဲ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ထ က်မှာရေး ထားတာဖြစ်ပါတ ယ်။
နာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေဝ ကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာ င္ပိုင္း မွာသာမက ပညာေရး မွာလည္း ထူးခၽြန္ထက္ျ မက္တဲ့မ င္းသမီး တစ္လတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အ စစအရာရာ ထူးခ ၽြန္တဲ့အျပင္ ေခတ္သစ္ေ ဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေ ထာင္ကာပရ ဟိတလုပ္င န္းေတြကို လည္း လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သူေလးလဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္ခင္ပြန္း အဆိုေတာ္ လင္း လင္းနဲ႔အတူ အမႊာသ မီးေလး ေခတ္ နဲ႔ သစ္ ကိုျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရ င္းေ ပ်ာ္ရႊင္စရာမိသား စုေလးကို တည္ေဆာက္ ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္သုေဝ က ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္ လွန္ေရးမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အစထဲက ပါဝင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိ န္ထိ အားႀကိဳးမာ န္တက္ဆက္လက္ေ တာ္လွ န္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လဲ စစ္ေကာင္စီ ရဲ့ ၅၀၅ (က) နဲ႔ အမႈဖြင့္ခံထား ရတာ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ လြတ္ေျမာက္နယ္ေၿမ ကိုေရာက္ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္သုေဝ က 2021 ရဲ့ ေနာက္ဆုံးရ က္ေလးမွာ တစ္ႏွစ္လုံးစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ” Your choice is your life, your dignity and your history!!!
“ကိုယ့္ရဲ့​ေရြးခ် ယ္မႈ​ေတြဟာ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ့္သိကၡာ ကိုယ့္သမိုင္း ပါပဲ” ဆိုၿပီး သူမရဲ့ လူမႈကြန္ယက္ထ က္မွာေရး ထားတာျဖစ္ပါတ ယ္။